भारत र चीनका सै’निकबीच लद्दाखमा फेरि झ’डप, अव के होला ? – Rapti Khabar
भारत र चीनका सै’निकबीच लद्दाखमा फेरि झ’डप, अव के होला ?
नयाँदिल्ली, भदौ १५
केही महिनादेखि त’नावपूर्ण सम्बन्ध रहेका भारत र चीनका सै’निक लद्दाखमा फेरि आमनेसामने भएका छन्।
भारतीय से’नाले चिनियाँ ज’नमुक्ति से’नाले शनिबार र आइतबार राति पूर्वी लद्दाखको प्याङगोङ सो ताल क्षेत्रमा पूर्वसहमति भएको सीमा क्षेत्र पार गरेको बताएको छ।
आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतीय से’नाका कर्नेल आमन आनन्दले भनेका छन्,’अगस्ट २९ र ३० को राति चिनियाँ ज’नमुक्ति से’नाले पहिलाको सहमति अनुसारको यथास्थितिलाई परिवर्तन गर्न सै’न्य उक्साहट गरेको थियो। जसलाई भारतीय से’नाले रोकेको छ।’
उनले चिनियाँ पक्षले उक्त क्षेत्रमा एकपक्षीय रूपमा तथ्यहरू परिवर्तन गर्न खोजेको पनि आरो’प लगाएका छन्।
गत जुनमा लद्दाखको गल्वान उपत्यकामा दुई देशका सै’निकबीच भएको झडपमा २० भारतीय सै’निकको मृ’त्यु भएको थियो।
उक्त घ’टनापछि दुई आ’णवीक शक्ति राष्ट्रहरूले वि’वादलाई थप अघि नबढाउन के गर्छन् भन्ने विश्वव्यापी चासो बनेको थियो।
चीन र भारत दुबैले अहिले सै’निक र कू’टनीतिक माध्यमबाट वि’वाद समाधानका लागि वार्ता गरिरहेका छन्। सँगसँगै उनीहरूले विवादित क्षेत्रमा सै’न्य जनशक्ति र स्रोतसाधन पनि थपिरहेका छन्।
यही बीचमा शनिबार र आइतबार रातिका झ’डप भएका हुन्।
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले सन् १९९९ को कार्गिल यु’द्धपछि पहिलो पटक लद्दाखमा चिनियाँ सै’निकसँग त’नाव ती’व्र भएको बताएका छन्।
पछिल्ला दिनमा पूर्वी लद्दाखको लाइन अफ क’न्ट्रोलनजिकै चीनले थप ५ हजार फौ’ज उतारेको उनीहरूको दाबी छ।
चीन र भारतबीच ४ हजार किलोमिटरभन्दा बढी सीमा जोडिएको छ। तीमध्ये कतिपय ठाउँमा अहिले पनि सीमा एकिन भएको छैन। लाइन अफ क’न्ट्रोल कुन हो भन्ने एकिन नहुँदा सीमामा तैनाथ दुबै देशका से’नाहरूबीच ध’केलाध’केल भइरहन्छ।
पछिल्लो समय सीमामा खटि’ने दुबै देशका सै’निकहरूसँग ह’तियार नहुने भएकाले उनीहरूको वि’वादमा गो’ली हा’नाहा’न भने हुँदैन।
तीन वर्षअघि चीन,भारत र भुटानको सीमामा पर्ने दोक्लम क्षेत्रमा दुई देशका सै’निक आ’मनेसा’मने भएका थिए। दोक्लम क्षेत्रमा चीनले बाटो बनाएपछि भारतले रोक्न खोजेको थियो। दोक्लम तनाव ७३ दिनसम्म चलेको थियो।
भारतसँगको त’नावका बीच चीनले तिब्बतबारे गर्‍यो महत्वपूर्ण घोषणा
भारतसँग सीमा विवादबीच चीनका राष्ट्रपति शी जिनपिङले एक नयाँ आधुनिक समाजवादी तिब्बतको निर्माणमा कोसिस गर्नुपर्ने आह्वान गरेका छन् ।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव र चीनको सेन्ट्रल मि’लिटरी कमिशनका अध्यक्ष शी जिनपिङले बेइजिङमा तिब्बतको विषयमा भएको एक उच्च स्तरीय बैठकमा यो टिप्पणी गरेका हुन् ।
तिब्बतको भविष्यको शा’सनमाथि कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ सदस्यको यो बैठकमा शी जिनपिङले उपलब्धिको प्रशंसा गरे र फ्रन्टलाइनमा काम गरिरहेका अधिकारीको पनि तारिफ गरे तर उनले यो क्षेत्रमा एकता बढाउन, त्यसलाई पुनः जीवन्त राख्न र बलियो बनाउनका लागि थप प्रयासको आवश्यकता भएको बताए ।
Posted on September 16, 2020 Author Rapti Khabar
भदौ ३१, काठमाडौं । बितेको २४ घण्टामा देशभर १५३९ जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन् । २४ घण्टामा यतिधेरै संक्रमित थपिएको यो संख्या हालसम्मकै उच्च हो । यससँगै देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या ५८,३२७ पुगेको छ । यस्तै उपत्यकामा एकै दिन थप ७३७ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । उपत्यकामा एकै दिन थपिएकाे याे […]
काठमाडौँको सडकमा नेपाली सेनाको जहाज किन गुडाईयो, हेर्नुस तस्बिर
Posted on September 12, 2020 September 12, 2020 Author Rapti Khabar
भदौ २७, काठमाडौँ । शनिबार साँझ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाली सेनाको जहाज गुडाउँदै दरबारमार्गस्थित नारायणहिटी संग्राहलय लगिएको छ । भीभीआईपी सेक्युरिटीमा पहिला राजसंस्थाले प्रयोग गर्ने नेपाली सेनाको जहाज नारायणहिटी संग्राहलय लगिएको नेपाली सेनाका सहायकरथी तथा प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलले जानकारी दिए । एभ्रो एयर क्राफ्टको जहाज सडकमा गुडाएरै आज रातिसम्म नारायणहिटी संग्रालय पुर्याइने पौडेलले बताए […]
आज २०७७ भदौ १५ गते सोमबार तपाईको राशिफल कस्तो छ ? पढ्नुस
नेपालमा टिकटकका कारण भयो यस्तो चमत्कार, अब के होला ?